Radio Don Bosco - Fisafoana ny aty ala
Fisafoana ny aty ala
Zava-dehibe amin'ny fiaraovana ny ala sy ny zava-boary ao aminy ny fisafoana ny aty ala. Manana andraikitra mikasika ny fisafoana ny aty ala ny Ong Durrell, araka ny nambaran'Andriamatoa Mandimbihasina Angelo Ramy. Ny Ong Durrell dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna, miaro ny karazana aina ahiana ho lany tamingana izay manana ny foibeny any Jersey.
Tamin'ny taona 1986 no tonga teo Madagasikara ny Durrell ka ny fampitomboana taranaka ny angonoka tao Ankarafantsika no nataony voalohany, avy eo, nihitatra tamin'ny fiarovana ny aty ala. Miasa miaraka amin'ny vondron'olona ifotony ny Durrell, any amin'ny faritra maro.